Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Airlines » Duulimaadyada ka imanaya Budapest ilaa Dubai ee flydubai hadda
Airlines • Airport • Aviation • Jebinta Wararka Yurub • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Hangari News • News • Dadka • Dib-u-dhiska • Waajib ah • Dalxiiska • Gaadiidka • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Wararka Imaaraadka Carabta
U adeegidda labada socdaal ee ganacsiga iyo dalxiisayaashaba si isku mid ah, imaanshaha flydubai waxay kor u qaadi doontaa awoodda Garoonka Budapest si ay u noqoto xarun caalami ah oo aad muhiim u ah. Wadaagista koodhka ee Emirates ee wadadan waxay u furaysaa in ka badan 190 goobood oo loo raaco diyaaradda oo ay ku jiraan Aasiya, Afrika, Australia, iyo Mareykanka.
Gegida Diyaaradaha ee Budapest waxay calaamad u tahay isku -xidhkii ugu horreeyey ee flydubai iyo Dubai oo ka yimid caasimadda Hungary.
Adeegga afarta jeer ah ee toddobaadlaha ah ee loogu talagalay magaalo-weynta Bariga Dhexe wuxuu shaqayn doonaa sannadka oo dhan.
Imaanshaha flydubai waxay si weyn u ballaarisaa isku xirnaanta albaabka Hungarian iyo xarunta Dubai.
U dabbaaldegaya imaatinka lammaanihii ugu dambeeyay ee diyaaradda, Madaarka Budapest waxay calaamadisay isku -xidhkii ugu horreeyay ee flydubai iyo Dubai oo ka yimid caasimadda Hungary. Adeegga afarta jeer ah ee toddobaadlaha ah ee magaalo-weynta Bariga Dhexe wuxuu shaqayn doonaa sannadka oo dhan wuxuuna si weyn u ballaadhin doonaa isku-xidhka albaabka Hangari iyo xarunta Dubai.
Furitaankii, Balázs Bogáts, Madaxa Horumarinta Diyaaradaha, Madaarka Budapest faallo ka bixiyay: “U adeegidda labada socdaal ee ganacsiga iyo dalxiisayaashaba, imaatinka flydubai on our rollcall side waxay kor u qaadi doontaa awooddeena xarun weyn oo caalami ah. Wadaagista koodka ee Emirates ee wadadan waxay u furaysaa in ka badan 190 meelood rakaabkayaga oo ay ku jiraan Aasiya, Afrika, Australia, iyo Mareykanka. ”
Ghaith Al Ghaith, Maamulaha guud, flydubai, ayaa yiri: “Waxaan aragnay baahida sii kordheysa ee safarka xagaagan iyo bilowga duulimaadyada Budapest, waxaan ballaarineynaa shabakadeena jadwalka jiilaalka si aan u siino rakaabkeenna doorasho dheeraad ah oo ay ku safraan. Hawlgalladeenna cusub ee aan hadda u bilownay Hungary waxay sidoo kale xoojin doonaan xiriirka Imaaraadka. ”
Flydubai, si sharci ah Shirkadda Duulista Hawada ee Dubai, waa diyaarad miisaaniyadeed oo ay dawladdu leedahay oo ku taal Dubai, Imaaraadka Carabta oo xafiiskeeda guud iyo hawlaheeda duulimaadka ku leh Terminal 2 ee Madaarka Caalamiga ah ee Dubai. Shirkaddu waxay wadataa 95 goobood, waxayna u adeegtaa Bariga Dhexe, Afrika, Aasiya iyo Yurub iyadoo ka timid Dubai.
Budapest Ferenc Liszt Madaarka Caalamiga ah, oo hore loogu yiqiinay Budapest Ferihegy International Airport oo haddana sida caadiga ah loogu yeero uun Ferihegy, waa gegida dayuuradaha caalamiga ah ee u adeegta caasimadda Hungary ee Budapest, illaa iyo hadda waa kan ugu weyn afarta garoon ee ganacsiga ee dalka.
Madaarka Caalamiga ah ee Dubai (IATA: DXB, ICAO: OMDB) waa madaarka caalamiga ah ee aasaasiga ah ee u adeega Dubai, Imaaraadka Carabta, waana madaarka ugu mashquulka badan adduunka taraafikada rakaabka caalamiga ah. Sidoo kale waa gegida dayuuradaha ee sagaal iyo tobnaad ee ugu mashquulka badan taraafikada rakaabka, mid ka mid ah garoomada xamuulka ee ugu mashquulka badan adduunka, garoonka ugu mashquulka badan Airbus A380 iyo Boeing 777, iyo garoonka diyaaradaha oo leh celceliska ugu badan ee rakaabka halkii diyaarad